Canada waxa ay wajahaysaa ‘halis’ kaga imanaysa Shiinaha iyo Ruushka, madaxa sirdoonka ayaa ka digay |
Canada waxa ay wajahaysaa ‘halis’ kaga imanaysa Shiinaha iyo Ruushka, madaxa sirdoonka ayaa ka digay
Waxaa jira “halis cad oo xiriir ah” oo salka ku haysa “faragelin weyn oo joogta ah oo shisheeye” oo ay wajahayaan dadka Canada, waxaa sidaasi BBCda u sheegay gudoomiyaha guddiga sirdoonka baarlamaanka dalkaas.
Xildhibaan David McGuinty ayaa waxa uu hadlayay xilli guddigiisu uu daabacay warbixintiisa sanadlaha ah taas oo ay ku jiraan faafaahin dheeraad ah oo hoosta ka xariiqaysa khatarta iyo talooyinka ay tahay inay qaadato dowladda si arrimahaas loogaga jawaabo.
Faragelinta ayaa waxa ay u dhacday dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin in la bartilmaameedsaday hannaanka doorashada, go’aan qaadashada dowladda, xorriyadda tacliinta iyo warbaahinta. Labada dal ee Ruushka iyo Shiinaha ayey warbixintu ku tilmaantay inay arrintaas mas’uul ka yihiin. Ruushka iyo Shiinaha marwalba waxa ay diidaan eedaha ah in ay faragelin sameeyeen.
Hadalka Mr McGuinty ayaa waxa uu imanayaa xilli war ku saabsan faragelinta Ruushka uu diyaariyay guddi kiisa u dhigma oo UK ay leedahay – waa guddiga sirdoonka iyo amniga – uusan weli daabicin warbixintiisa walow la dhammeystiray sanad ka hor.
Marka halista faragelinta shisheeye ay dhab tahay badanaa waa la qariyaa, waxaa sidaas lagu qoray warbixinta cusub ee guddiga, iyadoo soo qaadday dhowr waxyaabood oo kala duwan.
Waxyaabahaas waxaa ka mid ah habka dalalka ajaanibta ah ay isugu dayaan ayna u isticmaalaan khiyaano ay ku samaysanayaan siyaasiyiin, sida ay u saameeyaan wararka ka baxa warbaahinta, in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka qaar, in la waxyeeleeyo kooxaha difaaca xuquuqda aadanaha, iyo in la farageliyo xorriyada isu imaatinka iyo xorriyadda warbaahinta iyo tacliinta.
Ruushka ayaa waxaa lagu eedeeyay howlo uu ku beegsaday hannaanka doorashada ee Canada si uu galaangal ugu yeesho go’aan qaadashada dowladda iyo inuu koontoroolo ra’yiga dadweynaha.
Waxaas oo dhan markii la isku daro waxaa jiray “halis weyn oo ku aaddan xuquuqda iyo xorriyadaha Canada iyo madax banaanida dalka” oo ay ku jirto “suuragalnimada in la waxyeeleeyo hay’adaheenna dimuqraadiga ah”, Mr McGuinty ayaa wareysi uu BBCda siiyay sidaasi ku sheegay.
Qaar ka mid ah xogta gaarka ah ee tallaabooyinka la qaaday ayaa la qariyay ama aanan la shaacin sababtoo ah waxaa ku jira xog xasaasi ah.
Mr McGuinty ayaa sheegay in guddigu uu dowladda u soo jeediyay habab ay “arrinta wax uga qaban karto”.
Waxaa arrimahaas ka mid ah daahfurnaan iyo in bulshada xiriir lala sameeyo, in gudaha dalka ay dadku u midoobaan qeexidda iyo fahanka khatarta iyo in la horumariyo kulamada iyo wadashaqeynta howlwadeennada gobollada iyo magaalooyinka iyo sidoo kale jaamacadaha iyo kulliyadaha.